Orinasa fampiroboroboana entana vita amin'ny hazo any Sina | SJJ
Fitaovana fampiroboroboana hazoFitaovana hazo kalitao Premium, ECO-friendly. Hita amin'ny endriny, habe na endriny isan-karazany. Lavorary ho an'ny haingon-trano, fahatsiarovana, dokam-barotra ary fanomezana fampiroboroboana. Fofona voajanahary sy fahatsapana kanto. Tsara ho an'ny fanangonana. Fomba iray faran'izay mamatotra ny fahaizan'ny orinasa ...
Fitaovana hazo kalitao Premium, ECO-friendly. Hita amin'ny endriny, habe na endriny isan-karazany. Lavorary ho an'ny haingon-trano, fahatsiarovana, dokam-barotra ary fanomezana fampiroboroboana. Fofona voajanahary sy fahatsapana kanto. Tsara ho an'ny fanangonana. Fomba iray tsara hampifandraisana ireo tanjona kendren'ny orinasa amin'ny paikadin'ny fanomezana anao.
Fitaovana: hazo Beech / basswood / MDF
Drafitra logo: Fanontana offset / foil misy fanontana offset / fanontana silkscreen / sokitra laser.
Teo aloha: Haingo akrilika, Tags ary hafa
Heat Lanyards famindrana hafanana